मन्त्रीहरूको कामको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै प्रधानमन्त्री,प्रभावकारी काम नगर्ने मन्त्रीलाई फेर्ने संकेत ! « Pahilo News
मन्त्रीहरूको कामको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै प्रधानमन्त्री,प्रभावकारी काम नगर्ने मन्त्रीलाई फेर्ने संकेत !
प्रकाशित मिति :4July, 2018 12:12 pm
काठमाडौं, २० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कामलाई गति दिने गरी सशक्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । सरकार गठन भएको साढे तीन महिनामा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन भ्रमण गरेर सन्तुलित र नयाँ उचाइको सम्बन्ध विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई गति दिनेतर्फ अबको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न लागेका हुन् ।
दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन् । खासगरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम थपिने गरी भएका ती सबै सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै गति दिन विश्वासिलो संयन्त्र गठन गर्ने प्रक्रिया पनि द्रुत रूपमा अघि बढेको छ । मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास र ठूला परियोजनाहरूको सञ्चालन, औद्योगीकरण र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अपरिहार्य छ । यी सबै पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने गरी सरकारले अबको ध्यान केन्द्रित गर्ने बुझिएको छ । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । सस्ता र लोकप्रिय नाराको सट्टा समृद्धिको जग खडा गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध गर्ने गरी अघि सारिएको बजेटले ६ महिनाभित्र परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आफैले प्रभावकारी काम नगर्ने मन्त्रीलाई फर्ने संकेत सार्वजनिक रूपमा दिइ पनि सकेका छन् । पार्टीभित्र तथा बाहिरबाट पनि सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा ती गुनासोको समेत सम्बोधन गर्दै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको काम प्रभावकारी नदेखिए मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । यसबाट कतिपय मन्त्री र सचिवहरूको सातो उडेको बताइन्छ ।